Apple isingatarisirwi Mauto Patent: MagSafe eMatangi (WTF!) | Ndinobva mac
Iine iyo inozivikanwa kune vese seProjekiti Titan kumashure, hachisi chakavanzika icho Iko kufarira kwave kuchiratidzwa neApple mumakore achangopfuura muchikamu chemotokari.
Izvo zvinouya sechishamiso apo patent nyowani ine chekuita nekuunza kwakanyanya kuchinjika uye kufamba kune Matangi nemotokari dzemauto yakapihwa nekambani yeapuro, pamwe chete ne Bae Systems, kambani yakatsaurirwa kugadzirwa uye kutengeswa kwemotokari dzerudzi urwu.
Iyi patent nyowani, achireva mota inotaurwa inoverengeka iyo inogona kuita mafambiro nekukurumidza kukuru uye nyore, yakavakirwa pane yakasarudzika kana semi-zvachose pivoting sisitimu iyo inofambisa yayo inoenderana neyakavengana uye yakaoma-kusvika-kuwana nharaunda. Mhando dzemotokari dzinogona kubatsirwa neiyi tekinoroji dzinogona kubva kumarori anorema, kumabhazi, matramu kana zvitima.
Sketch yeiyo patent inotiyeuchidza nezve inozivikanwa Apple MagSafe paMac's.
Iyi tekinoroji nyowani yaizofambisa kufamba munzvimbo dzine chando kana chando, kana magwenga pane iyo kufamba kwemotokari kwakadzikira zvakanyanya. Uye zvakare, chingave mukana mune chiitiko icho chakati mota inotambura nekunze kukanganisa, munguva dzehondo, senge pfuti kana kumberi kurovera netangi remuvengi.
Hukama hweiyi patent nyowani, iyo yava kuuya kumberi, uye mota yemagetsi yaApple haina kana kujeka, asi kana bvisa kusahadzika chero kupi zvako nezve zvido iyo iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakave nayo kwenguva yakati munyika yemotokari.
Iyi patent ingave inoenderana here neramangwana "Apple Mota" iyo yakatimirira mumakore anouya? Mundima iyi, hapana munhu ane chokwadi nezve chero chinhu, uye Apple chete ndiyo inoziva zvinangwa zvako nezve chako chinangwa chirongwa. Ngazvive sezvazviri, isu tiri kutarisira mberi kune ruzivo rutsva nezve waunoziva Titan Project.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple isingatarisirwi Mauto Patent: MagSafe eMatangi (WTF!)
Apple Pay iri kunetseka nemamwe mabhanga eAustralia